Wasiirkii ugu dhowaa Axmed Madoobe oo wada hadal la yeeshay madaxda DFS
May 21, 2020 Mahad Jama 7
NAIROBI(P-TIMES)- Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in Wasiirka Amniga Jubbaland uu haatan ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
Wasiir C/rashiid Xasan Cabdi Nuur (Janan) ayaa la sheegay in uu wada hadal la furay dowladda federaalka Soomaaliya.
C/rashiid Janan ayaa baxsad ka ah dhanka dowlada dhexe maadaama ay ku haysay xabsi ku yaala magaalada Muqdisho, hasa yeeshee waa uu ka baxsaday taas oo sababtay ugu dambeyntii in uu galo dalka Kenya.
Wasiir Janan ayaa ayaa hadii uu wada hadal la yeesho dowladda dhabar jebin ku samayn doona Jubbaland, waxaana uu kamid yahay shakhsiyaadka ugu dhow hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Dadka inta badan falanqeeya siyaasada Jubbaland ayaa ku micneeyey qorshaha Janan mid aan suurtagalayn balse ay ku khasbayaan duruufo adag oo horyaala, kuwaas oo ay adag tahay ka gudbitaankooda.
Jubbaland oo khilaaf adag uu kala dhaxeeyo dowladda dhexe ayaa xiisada u dhaxaysa ay sii xumaanaysay mudooyinkii ugu dambeeyey, taas oo sababtay dagaalo toos ah iyo in dowladdu ay la wareegto ciidamadii Jubbaland ee gobolka Gedo.
Waxaan u maleynayaa puntlandtimes waxay leedahay hal il oo ay ku aragto dhaliilaha Puntland, iyo wixii buunbuunis u ah Villa Somalia. Weli arag puntlandtimes oo ka hadlaysaa kiiskii badda ee dib loo dhigay! Come on, ka hadla kiiska badda ee uu xagaldaaciyey doqonka aammusan ee afgarooca ah.
Arrinka wasiir Janan, haddii uu isu dhiibo Farmaajo gorgortan la’aan, markaas waa nin aan mabda’ lahayn.
Farmaajo weligiis xabsiga kama siiddaayeen ilaa uu gaaro riyada ah inuu mooryaanta Galgaduud ka timid u qabto Kismaayo. Axmed-madoobe ayaa u huray wax kasta oo xabsiga kasoo fakiyey.
Waxay ahayd inuu adkeysto inta doorashada laga gaarayo. Haddii uu galo gorgortan adag oo aan wax u dhimayn dhismaha Jubbaland, nin rag ah dheh. Haddiise uu isu dhiibo qorshaha Farmaajo iyo damaca Itoobiya ee Kismaayo, taasi waa aafo usoo hoyatay reer Jubbaland iyo Soomaali guud ahaan.
Soomaalidu waa qabaa’l. Haddii Ogaadeenkii ay Nairobi ku heshiiyeen, Mariixaankuna Nairobi ayey ku heshiinayaan.
A.arar fadlan bishii barakaysanyd ayaa lagu jiraa kula googoosan kari mayno lkn waxaan ku leeyahay noo daa madaxwaynaha qaranka hadaadan adigu wadankan dan ka lahayn oo sheekadaadu ku kooban tahay ardaa loo hadlo waxaas ilaahay waa naga koriyey sawirka sare ayaanu aragnaa, qolqolka hoos uma eegno mana rabno adigu dabo ka dhigo.
War arinto waxay u egtahay,in gaarigii laga hormariyey, faradkii jiidi lahaa.
Waa wax aan marna dacad laga ahayn,in shacabka Puntland ay helaan,dad matala oo ay iyago si tuus ah u doortaan.
Mudo ku dhow 22 sanadood baa waxa ka jiray Puntland cadaalad daro iyo in qayb badan oo ja mid ah,shacabka ku nool Puntland aysan weligood helin in ay xubno ku yeeshaan golaha xildhibaanada la soo magacaabo ee beelaha,taasi ayaa ugo wacan in dad badani ay tirsanaysan in si cad looga hor-istaagay in waxa beeluho soo magacaabayaab ay qaybtooda helaan.
Waa in xisbiyadaani la iska hubiyo in ay yihiin kuwo si dhab ah,oo madax banaani ah ay dadko ugo codaynkaraan.
Waa in deegaan walba ay dadka ku nooli ay doortaan cida ,ay rabaan.
Waxaa iyana muhiim ah,in tirada xildhibaanada Puntland in si xaq iyo cadaalad ah loga heshiiyo inta aan lago dhaqaaqin,doorashada.
Waa in arinta demoquraadiyada nidaamka xisbiyada aysan noqon faanoole fari ka ma qodna,oo waxoogaa lacag ah,hay’adaha dunida ee taageera nidaamka xisbiyada lacg looga qaato,sida iminka ba ka jirta,meelo badan oo ka mid,18 gobol ee Soomaaliya.
WAR BAL daya Caqliga A.Arar; “Haddiise uu isu dhiibo qorshaha Farmaajo iyo damaca Itoobiya ee Kismaayo, taasi waa aafo usoo hoyatay reer Jubbaland iyo Soomaali guud ahaan”.≈©≈WAA markay LAAMO aan jirin haabhaaba jidhay WAR WAXAA tiraah; “WAA AAFO USOO HOYATAY AXMED MADOOBE IYO DABADHILIFYADA SIDA A.Arar”.≈©≈WAR maxaad lugta ugu jiidan Qoom aadan aragti wadaagin? sida shacabka reer Jubbaland ee uu XABBADDA dhafoorka uga hayyo Axmed Madoobe? Maxaadse sheekada ugu soo dartay Itoobiya sow munaafaqnimo iyo kalsooni raadi ma aha?. ≈©≈A.Arar, ruux qabyaaladi oofsatay sidaada MABA yeelan karo aragti Somali. WBT
Dhinaca kale waxaan qirayaa in Farmaajo lagu khasaaray.
@@@ Axmed Soomaali!!!
Waxaad tahay “Mooryaan” Habatgidir ah oo magac ka weyn soo qaatay si uu dadka u qaldo!!
Bal fiiriya caqliga Mooryaankan!! A. Ararna wuxuu ku weeraray aragtidiisa, Farmaajo Hurdaayihii Beeshiisa u shaqeeynayeyna wuu weerarayaaye xaggee u Roon, Mooryaankan jid iyo jaho diidka ah.
Malaha waxaad is leedahay, Culusoow ayaa soo noqonaya uu kuu qaban doono illaa iyo Burtinle! Adeer Culusoowna soo noqon maayo, adiguna sidaa ayaad Tiih ugu jireeysaa oo aad u ahaaneeysaa, Diirato aay Soomaali oo dhami nacday!
Mooryaan, meelo badan ayaan kuugu arkay, adigoo ku muujinaya, naceybka aad Daarood u qabto, qaasatan reer Puntland. Waana sababta aad u wada weerartay, A. Arar iyo Farmaajo Hurdaaye oo aad isku qaanad u gelisay!!
Midda kale, Gobolada dhexe oo aad wax ka degto ayaay deriskaagu kuugula noolaan la’yihiine, maxaa kaa galay Jubaland iyo Arrimaheedu?!
Mase, Jilibta aad adiga iyo Sheekhaal ku habsateen, ee uu Shabaab kugu hayo ayaad mooday, in aad sidaa ku yeelaneeyso?!
Mooryaan, shalaad dhalataye, waa la shubi jiray!!